Mobile Legends Yve လမ်းညွှန် : အကောင်းဆုံး Build နှင့် Zhask ရဲ့ သေလောက်တဲ့ရန်သူကို counter နည်း | Codashop Blog MM
Mobile Legends Yve လမ်းညွှန် : အကောင်းဆုံး Build နှင့် Zhask ရဲ့ သေလောက်တဲ့ရန်သူကို counter နည်း
Mobile Legends ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် mage hero, Yve ကတော့ တကယ့်အပြင်လောကမှာကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်နေသလို ပုံစံတွေပဲလာပါတယ်။ ဘာကိုဆိုလိုချင်လဲဆိုတာကတော့ သူကရူးခါလောက်တဲ့ damage ပမာဏကိုထုတ်နိုင်ပြီး ရန်သူတွေကို အစွမ်းမပြနိုင်တော့လောက်အောင် အရှက်ခွဲတာပါ။ Yve ရဲ့ ultimate ကတော့ ဂိမ်းထဲမှာ အရင်ကနဲ့လုံးဝမတူဘဲ ပြောင်းလဲပစ်လိုက်တဲ့ပုံစံပါ။ သူက ဇယားကွက်တစ်ခုကိုလုပ်လိုက်ပြီး ကစားသူတွေကို အကွက်တစ်ကွက်ထဲမှာ နှိပ်တာ ဒါမှမဟုတ် ရွှေ့တာတို့ကိုလုပ်ပြီး damage ထုတ်နိုင်တာပါ။ ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ ဂိမ်းထဲမှာ တခြားဂိမ်းအသေးလေးဆော့နေရသလိုပဲနော်!
Yve က သူ့ရဲ့ burst ပါတဲ့ ultimate အစွမ်းကြောင့် ဒုက္ခပေးနိုင်တယ် ဒါပေမယ့် အဲဒါဟာ တိုက်ပွဲထဲမှာ သူ့ကိုလုံးဝတားဆီးလို့မရဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဒီ Astrowarden နဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့ရတာခက်ခဲနေရင်တော့ သူ့ကိုဘယ်လို counter လုပ်နိုင်လဲသိဖို့ ဖတ်ကြည့်ပါ ( Zhask main တွေအတွက်အချိန်ကျပါပြီ)။
Yve ကိုသုံးပြီး MLBB မှာဘယ်လိုနိုင်မလဲ
အဓိကကသူ့ရဲ့ ultimate ကိုပြင်ဆင်ထားဖို့ပါ။ Skill 1 နဲ့2ကိုသုံးရင်တော့ stacks တွေ (10 ထိအများဆုံး) ရဖို့ကူညီပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင် skill 1 နဲ့2က သူ့ရဲ့ ultimate အချက်ရေတွေတိုးပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ရန်သူတွေကိုပစ်မှတ်ထားဖို့ starfield ထဲမှာနေရာပိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သုံးနိုင်မှာပါ။
Skill2က သင့်အတွက် range ပိုကျယ်တာမို့လို့ skill2ကိုအရင်ယူထားပါ။ ပြီးမှ Skill 1 ကိုယူပြီး အမြင့်ဆုံး level ရောက်အောင် upgrade ပါ။
Yve ရဲ့ Real World Manipulation Skill ကိုအပြည့်အဝအသုံးချတတ်အောင်လုပ်ပါ။ သူ့ရဲ့ ultimate ကိုနှိပ်ပြီးတာနဲ့ starfield ထဲမှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့နေရာကို burst damage ရောက်အောင် နှိပ်ပါ။ အဲဒီနေရာမှာပဲ magic damage အဆက်မပြတ်ထွက်ပြီး ရန်သူတွေကို 3စက္ကန့်လောက်နှေးအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ ဘေးကိုဆွဲရမှာပါ။ ဒီနည်းလမ်းနဲ့ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ပစ်မှတ်ရန်သူတွေ အသက်လုပြေးနေရမှာသေချာပါတယ်။
Yve ရဲ့အနိုင်ကွက်ကတော့ ရန်သူတွေကိုထပ်ကာတလဲလဲဒုက္ခပေးတာပါ။ အဲဒါကြောင့် သူရဲ့ ပထမနဲ့ဒုတိယ skill တွေနဲ့ သူတို့ပြန်ဆုတ်သွားအောင် ခဏခဏ skill တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ပါ။ ပြီးရင် map ကိုလည်းသတိထားပြီး အဖွဲ့လိုက် ganking လုပ်ဖို့ပူးပေါင်းရပါမယ်။
Yve အတွက် လွတ်အောင်ကစားဖို့ကတော့ နည်းနည်းခက်ပါမယ်။ Yve က mobility သိပ်မကောင်းလို့ ဂိမ်းတစ်လျှောက်လုံးသူ့ရဲ့damage အကြမ်းတွေကိုသုံးချင်ရင်တော့ တတ်နိုင်သလောက်တော့ အသေမခံဖို့လိုပါတယ်။
Yve အတွက် items တွေစပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ရန်သူတွေကိုချေမှုန်းဖို့ damage အများဆုံးကိုစပ်သင့်ပါတယ်။ Demon Shoes က စောစောစီးစီး mana regen ထုတ်ပေးပြီး အပို movement speed ကိုလည်း early game မှာထုတ်ပေးပါတယ်။ Clock of Destiny ကအရမ်းအရေးကြီးတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူက HP နဲ့ Magic Attack ကို စက္ကန့် ၃၀ တိုင်း ၁၀ခါစီထုတ်ပေးပါတယ်။ Lightning Truncheon က ကိုယ့်ရဲ့ mana အပေါ်မူတည်ပြီး damage ထပ်တိုးပြီးအဓိကထုတ်ပေးတဲ့ရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်။ Ice Queen Wand ကကျတော့ ထပ်ပြီးနှေးသွားစေမယ့် effect ဆိုတော့ ultimate ကိုပံ့ပိုးပေးတယ်။ Glowing Wand ကလည်း ပစ်မှတ်တွေကိုလောင်စေမှာပါ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ Blood Wings နဲ့ အပို HP နဲ့ Magic Power ကိုယူနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ရန်သူရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုကြည့်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာဖြည့်ပေးဖို့လည်း အားစိုက်နိုင်ပါတယ်။
Yve ကို counter ဖို့ hero များ
Yve ကတော့ သူ့ build ပြည့်စုံသွားရင် ငြင်းမရလောက်အောင် လွှမ်းမိုးမှာပါ ultimate သုံးတဲ့အနေအထားတွေပါသိထားရင်ပိုဆိုးတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် Yve ရဲ့ တမူထူးတဲ့ ultimate ကို counter ပြီး သူ့ damage ကိုဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့ heroes တွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒီလိုလျှိုထားတဲ့အကွက်တွေကပဲ Yve ကို သူသာနေတဲ့နေရာကနေဆွဲထုတ်သွားမှာပါ။
Franco. Yve ကိုတိုက်ထုတ်ဖို့ အားပြင်းပြီး ကြမ်းတဲ့ ဒိုင်လျှိုအကွက်တွေလိုချင်ရင်တော့ Franco ကိုခေါ်ထုတ်းပါမယ်။ Yve ရဲ့ skill တွေ active ဖြစ်နေတုန်း သူ့ရဲ့ ultimate ထုတ်သုံးပါ။ Franco ရဲ့ မသိမသာအကွက်တွေက သူ့ကို စက္ကန့်အနည်းငယ် ငြိမ်သွားပြီး လှုပ်လို့မရအောင်လုပ်ပါလိမ့်မယ် အဲဒါမှ သူ့ရဲ့မရပ်မနားတိုက်ခိုက်နေတာတွေ ရပ်သွားမှာပါ။
Kaja. Yve ကိုတိုက်ထုတ်ဖို့ လိုအပ်တာတွေရှိနေပါတယ်။ Kaja ရဲ့ Divine Judgment ultimate ဟာဆိုရင် Magic Damage နဲ့ Yve ကိုတရွတ်တိုက်ဆွဲပြီး သူ့ရဲ့ ultimate ကိုပါ တစ်ခါတည်းချုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်။ ဒါက အထူးအဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး Kaja က MLBB heroes တွေထဲမှာ counter အလုပ်နိုင်ဆုံး heroes တစ်ယောက်ဖြစ်လို့ပါ။
Nana. ချစ်စရာလေးဆိုပြီးလျှော့မတွက်ပါနဲ့။ ရှေ့က hero2ကောင်လောက်တော့ အသုံးဝင်ချင်မှဝင်မယ် ဒါပေမယ့် Yve ကို နှောင့်ယှက်ဖို့တော့ Nana ကအကောင်းဆုံးပါပဲ။ Nana က နှောင့်ယှက်လို့အကောင်းဆုံး crowd control စွမ်းရည်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ Yve ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကို Molina Smooch သုံးပြီး သူ့ကို ကြောင် အသွင်ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ ပြီးတော့ Molina Blitz ကိုလည်းသုံးပြီး သူ့ရဲ့ AOE အကောင်းစားနဲ့ Yve ကို counter လို့ရပါတယ်။
Previous articleFragment Shop ကနေ နောက်ထပ် MLBB Starlight Skin ရမယ်လို့ သင်လောင်းရဲလဲ?
Next articleWild Rift Patch 2.2 – Champions အသစ်များ ၊ Wild Pass ၊ ARAM mode နှင့် အခြားအရာများ